Ngwongwo premixed - Divenland
Masonry, akwa na ngwa agha
Masonry na ịre plasta ka ọ bụrụ akụkụ kachasị mkpa nke azụmahịa banyere ngwa ụlọ, cellulose ether na-arụ ọrụ dị mkpa. Ezigbo ngwa agha kwesịrị ịnwe dị mma ma dịkwa mfe itinye, mma na-enweghị osisi, oge zuru oke iji rụọ ọrụ, dị mfe ọkwa; na nhazi nke ngwa agha kwesiri ịdị mma ka ọ dị mfe itinye n'ọrụ, mma na enweghị osisi, oge zuru ezu iji rụọ ọrụ, ịdị mfe nke ọkwa; na nhazi nke ngwa agha kwesịrị ịdị mma iji tinye, mma dị mma na nke na-abụghị osisi, ọ dị mfe ọkwa; na nhazi nke ngwa agha kwesịrị ịdị mma iji tinye, mma dị mma na nke na-abụghị osisi, ọ dị mfe ọkwa; na sisitemu igwe agha kwesiri idi nma ka odizie owuwe ihe ugbua, okwesiri aghaghi inwe ezigbo mgbapu ihe iji gbochie ohere ibipu ya. Ahụ siri ike nke anụ ahụ kwesịrị ịnwe akụrụngwa dị mma na ọdịdị elu ya, ike dị mma, ike ya, enweghị oghere ilu, enweghị mgbawa.
Ngwongwo nchekwa mmiri cellulose ether na-ebelata mmiri nke onye na-enweta ọtụtụ ebe, na-akwalite hydration nke ihe gel ka mma, na mpaghara buru ibu. O nwere ike belata ihe puru iche nke igha ahihia na ngwa ngwa ma mee ka nkekọ sie ike; ya ndim ike nwere ike melite wetting nke mgbochi mmiri na isi ala. Cellulose ether na-eme ka ngwa agha ahụ dị mmiri, ma na-ebelata ma ọ bụ na-ezere delamination na mmiri nzuzo. Rheology na belata nguzogide, si otú a na-abawanye pọmpụ ma na-ebelata ike ọrụ. Ngwakọta ngwongwo cellulose ethers na-enye ihe dị iche iche na-egbochi sagging mgbe ị na-etinye okwute dị arọ, nke nwere ike belata oge owuwu ma belata Waste.
Igwe mmiri Wet bụ ngwakọta nke ciment, nchịkọta dị mma, ihe ndị ọzọ (ọkachasị cellulose ether), mmiri na ihe dị iche iche kpebisiri ike dabere na njirimara ahụ, dịka otu ruru, mgbe ị tụtara ma jikọta ya na osisi agwakọta, wee buru ya gaa ebe were site na ịgwakọta ngwongwo, tinye ya n'ime arịa pụrụ iche maka nchekwa, ma jiri ya na oge a kara aka.
Tụnyere ngwa ọdịnala dị n’etiti ọdịnala, nnukwu ihe dị iche bụ ntinye nke ngwa agha gbanyere mkpọrọgwụ, dịka ntinye nke usoro Max cellulose ether nwere ike ịbụ ihe nkwanye ugwu nke na-eme ka ngwa agha dịkwuo mma, ma si otú a na-eme ka ngwa agha ọhụrụ ahụ agwakọta, nnukwu njigide mmiri, ogologo oge, ogologo dị elu mgbe ọ na-agbapụta mmiri Ọ nwere ezigbo arụmọrụ na-arụ ọrụ. Ya nnukwu uru bụ elu ewu arụmọrụ, ezi mma nke ngwa agha mgbe akpụ, na n'ihi a nnukwu mbụ ọsọ nke ngwa agha mgbe spraying. Ya mere, ọ nwere ike ịnwekwu ntụkwasị obi na mkpụrụ ahụ, nke nwere ike belata mmetụta nke oghere ịgbawa.